Ahoana ny fomba hahitana ireo fakantsary miafina ao an-tranonao, fiara sy birao? - Vahaolana OMG
Ahoana ny fomba hamantarana ireo fakantsary miafina ao an-tranonao, fiara sy biraonao?
Asa mahakivy ny mahita fakantsary miafina ao an-tranonao, fiara sy fiasanao. Mampalahelo fa mihamaro ny olona mimenomenona momba ity fanafihana tsiambaratelo ity satria lasa fironana misongadina. Ny fandinihana iray dia nanondro fa ny 11 isan-jaton'ny mpandray anjara dia nahita fakantsary miafina ao an-tranony, fiara na biraony, na hotely. Arovy ny tenanao amin'ny alàlan'ny fitadiavana ireo fakantsary miafina ao amin'ny manodidina anao. Ho fitsinjarana ny vokatra avo lenta ho an'ny fanaraha-maso kitiho eto.
Fomba fanamarinana ireo fakantsary miafina:
Tamin'ny resadresaka nifanaovana iray, manam-pahaizana momba ny fanaraha-maso ara-teknika sy manam-pahaizana momba ny fahakingana dia nandà ny hampahafantatra ny anarany izy noho ny fahatsapan'ny asany ary nilaza tamin'ny solon'anarana The Monk. Nikaroka ireo fitaovana nafenina tao amin'ireo faritra misy fifandirana izy ireo ho an'ny vondron'olona mpiaramiasa amerikanina manokana. Nanome torohevitra ho anay izy mba hikarohana fakantsary miafina.
Misy fomba telo manan-danja indrindra amin'ny fisavana fakantsary miafina:
Fanamarihana ny onjan'ny radio (RF)
Inona ny RF?
Izy io dia ny Radio Frequency scanning izay manampy amin'ny fampahafantarana fitaovana iray izay mifindra mavitrika. Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny olona dia te hanana ny tsiambaratelony saingy maro ireo mampiasa fitaovana betsaka hanakanana ny fiainana manokana. Vahoaka marobe no mandeha amina fitaovana noho ny fitaovana toy izany manimba ny fiainana manokan'ny hafa fa miaraka amin'ny famoronana radio scanner momba ny onjam-peo, dia voavaha ny olana. Ohatra, Spy Fanamarihana famantarana ny fakantsary fakantsary / Lens / Magnet Detector (SPY 995), Fikarohana miafim-pikarohana miafina Spy (SPY999), GPS / SPY Camera RF Dual Signal Detector, sakany 1-8000MHz, GPS / 1.2G / 2G / 3G / 4G, elanelana 5-8 (SPY993). Ireo fitaovana ireo dia manana fiasa mandroso handalinana ny fakantsary miafina.
Ahoana ny fomba hamantarana ny fakantsary miafina:
Mieritreritra momba ny hoe mijery tsara amin'ny trano, fiara, hotely, na birao ianao dia mety hanimba ny fialam-boly sy fiononana. Raha tonga lafatra ny fisavana dia afaka mandray hetsika ianao hanandrana mamantatra ireo fakantsary mpitsikilo miafina sy fitaovana fanaovana an-tsoratra. Ny fanapahanao izay fepetra tokony hampiasaina dia miankina amin'ny hoe hatraiza ny fahatakaranao ary ny habetsaky ny fahavononanao hanelingelina ny fijanonao hanao fikarohana.
Mitadiava fihazana ara-batana ao amin'ilay faritra, hitadiavana ireo zavatra napetraka be dia be toy ny biby be loatra, mpanamboatra setroka, sary amin'ny jiro, jiro na boky. Afaka mahita fakantsary ianao amin'ny alàlan'ny mitady zavatra izay toa manondro ireo faritra amin'ny efitrano amin'ny fomba tsy mahazatra. Azonao atao ny mahita fakantsary miafina miafina ao anaty seza, latabatra na sofa, na ao anaty vazy sy vilany na ao aorin'ny ambainy.
Ny teboka miafina hafa dia ny fikarohana fitaovana fandraisam-peo. Ny Safe Alarm rehetra, izay mamokatra fitaovana CCTV, dia manome soso-kevitra ny famonoana ny jiro rehetra sy ny fitadiavana jiro maitso na mena kely; ireo dia famantarana ny tondro LED "herinaratra" ho an'ny fitaovana fandraisam-peo. Soso-kevitra iray hafa ny fikarohana teboka na lavaka ao anaty casing fanaka sy rindrina izay mety hanondro fakan-tsary miafina ao aoriany. Tokony hovonoinao ny fitaovana elektrika rehetra, ao anatin'izany ny vata fampangatsiahana sy ny fividianana rivotra, ary henoy ny buzzing baffling na fikitihana izay mety hanondro fitaovana fandraisam-peo. Aza vonoina ny sefom-pifandraisana voafehy elektronika, satria mety hiteraka lesoka izany na hiteraka fiampangana tsy ampoizina.
Mitadiava jiro misy tselatra na jiro. Ny ankamaroan'ireo fakan-tsary sy fitaovana fihainoana dia misy vonona na amin'ny jiro, ary ny kaserony dia hanampy anao hahita izany. Na dia mety ho kilemaina aza ireo jiro ireo, dia mety hanadino na manomboka ny tsy fitadiavanao ilay fitaovana nambolena ity natombony. Ny famonoana jiro dia afaka manampy anao hikaroka izany.
Miezaha hihaino tabataba elektronika, mbola, na mibitsibitsika rehefa mikaroka ao amin'ny efitrano ianao. Na dia maro aza ny fitaovana fandraketana feo afaka miasa amin'ny fomba miafina, ny tsindry ataon'ny fitaovana elektronika dia matetika tsy azo hampanginana. Mety misy feo elektronika maro izay tononinao, ka henoy tsara izay zavatra tsy mitovy amin'ny azy. Fitaovana fihainoana manampy, toy ny fitaovam-pandrenesana, dia mety tsy hanohana raha tsy miakanjo matetika ianao, satria sarotra ny manavaka ny feon'ny zavatra vahiny amin'ny tabataba ataon'ny fihainoana. Radio Frequency Detector dia tena ilaina amin'ity lafiny ity. Ho an'ny fikarohana ireo vokatra mpitsikilo toy izany hitsidika ny tranonkala.
Mamirapiratra jiro jiro amin'ny faritra maro ao amin'ny efitrano, indrindra amin'ny sehatra hita taratra. Indraindray, ny olona dia manafina ireo fitaovana fanaraha-maso ao ambadiky ny fitaratra na karazana vera hafa izay manarona tsara izay ao ambadiky azy ao anatin'ny tarehin-jiro mahazatra, fa mampiharihary na inona na inona raha hazavana mahitsy eo io. Mety ho azonao atao koa ny maka taratra avy amin'ny solomaso fakantsary miafina. Ny jiro fandefasana jiro dia hanampy amin'ny fikarohana ara-batana anao amin'ny alàlan'ny fanitarana ny habaka tadiavin'ny masonao ary hahafahanao mifantoka amin'ny zavatra tsy mety.
Mampiasà mpanara-maso fanamafisam-peo Radio Frequency (RF) hanampiana amin'ny fandalovanao. Ireny vondron-tanana ireny dia mety hahafantatra ny fisehoan'ny onjam-peo izay ampiasain'ny fitaovana, ary manampy amin'ny fitadiavana azy ireo. Raha misy mpitsikilo famantarana tsy hilaza aminao ny tena misy ny fakantsary miafina, dia hampitandrina anao izany rehefa manakaiky ny faran'ny loharano ianao, ary manampy anao hahita haingana haingana. Amin'ity lafiny ity dia ilaina ny vokatra kalitao ambony, ho an'ny antsipirihany bebe kokoa kitiho eto.
Raha te handany fotoana bebe kokoa ianao hitadiavana fakantsary miafina, dia afaka mitsambikina any amin'ny toerana maro hafa izay mety hiafina ny fakantsary mpitsikilo na mikrô. Andrew Capelle, mpanoratra teknolojia mitsangatsangana dia manoratra fa ny fakantsary dia miafina tsy takona amin'ny zavatra be loatra, ohatra, ny fahitalavitra lehibe. Nanoro hevitra izy ny hijery amina sokajy roa amin'ny fangalarana toerana miafina toy ny mpankafy, tranga fanilo ary valizy; ary zavatra kely azo ovaina toy ny famantaranandro fanairana, jiro mihetsika, na telefaona.
Miaraka amin'ny, ireo fomba voalaza etsy ambony ireo hamantarana ny fakantsary miafina ao an-trano, birao, na fiara, andeha hanolotra soso-kevitra bebe kokoa sy fomba hafa amin'ny famahana fakantsary miafina isika.
Ahoana ny fomba mamamaoka efitra / fiara / birao ho an'ny fitaovana fitsikilovana elektronika amin'ny alàlan'ny fanampian'ny Radio Frequency Detector:
Ny fitaovam-peo mihaino sy ny harika dia tsy vitan'ny governemanta ihany fa amin'ny sehatry ny mpandraharaha sy ny olona maniry ny hisintona na hitsikilo ny hafa. Na dia mandroso ara-teknolojika aza ny sasany amin'ireo fitaovana ireo, dia saika tsy azo làlana izany, ny ankamaroan'ny harika dia mety ho hita miaraka amin'ny fahatsorana mora satria miankina amin'ny loharanom-pahefana sy ny radio radio. Mba hivoahanao raha napetraka ao an-tranonao, birao na fiasanao ny fitaovana hihainoana, dia mila mandinika ny loharanom-pahefana rehetra ianao ary hijerena ny onjam-peo ao amin'ny faritra.
Esory ny takelaka fanokafana rehetra ary apetraho ireo takelaka ao anaty efitrano tadiavinao. Raha vao manaisotra takelaka ianao, dia tokony hojerena ny lavaka miendrika misy atiny tariby ao anaty rindrina ao aorin'io. Ireo lavaka ireo dia toerana lehibe hanafenana fitaovana satria manome fitaovana mora foana ho an'ny loharanom-pahefana izy ireo: ny tariby. Ankehitriny, ampamirapirato ny lela tsirairay amin'ny lavaka tsirairay avy amin'ny rindrina. Ny fantsom-pifandraisana ihany no hojeranao. Raha lasa mahatsikaritra izay rehetra heverina ho mampiahiahy na tsy misy toerany ianao, aza manohina azy. Mifandraisa amin'ireo manampahefana amin'ny fampiharana ny lalàna ary lazao azy ireo izay hitanao.
Diniho ny loharanom-pahefana hafa azo tratrarina hafa izay mety ho ao anaty efitrano, toy ny, fuse boaty ary ny hazavana maivana amin'ny fomba mitovy. Miverena indray, raha misy mahita, miantso polisy.
Hamarino koa ny habakabaka sy ny jiro. Amin'ireny toerana ireny, matetika dia be ny tariby miharihary, loharano herinaratra mora azo.
Fandrafetana ny valin'ny Radio momba ny Radio:
Ampiharo ilay mpanadihady radio (Frequency) onjam-peo, mamadika ny fisintonana ary apetraho amin'ny savony malefaka. Tokony hanomboka hitsoka haingana izany.
Avereno hiverenana ny fanombohan-tsofina amin'ny fisavana radio Frequency mandra-pijanonan'ny fandriampahalemana tanteraka.
Manaova antso an-telefaona amin'ny iray amin'ireo findainao mankany amin'ny iray hafa, fa mijoro eo akaikin'ny radio Frequency detector. Tokony hanomboka haingana haingana.
Mifindra manodidina ny 10 mankany 12 tongotra hiala amin'ny Radio Frequency detector raha mbola mitazona ny fisokafan-telefaona finday. Ny mpikaroka dia tokony hijanona amin'ny toromaso, saingy tsikelikely, amin'ny savony eo amin'ny tadidin 160 isa-minitra. Raha mihenjana miadana kely noho ny tadim-baravarana 120 isa-minitra eo amin'ny roa isan-tsegondrao, dia ampodio ny antso an-telefaona mba hanamafisana ny fahatsapana azy. Raha mivezivezy haingana kokoa noho ny kapoka 160 isa-minitra, dia avereno midina kely ilay dial.
Mitsoka ny Biby:
Arosoy tsikelikely ireo mpanentana Radio Frequency amin'ny alàlan'ny fitaovana ivelan'ny fitaovana elektronika rehetra ao anaty efitrano, ary mitazona ny Radio Frequency Detector tokony ho roa tongotra miala amin'ny fitaovana tsirairay. Raha manomboka mihoson-drà izy io, dia ho azo antoka fa voafafa ilay fitaovana alehanao. Raha mitohy miakatra haingana ny detector Radio Frequency, dia mety ho nahita harika iray ianao.
Ataovy izay hampifanaraka ireo zavatra tsy mandeha amin'ny herinaratra rehetra ao amin'ny efitrano ity — fitoeran-kazo, latabatra, seza sns ... ary farany amin'ny rindrina. Ny bipiky tokana avy amin'ny detector Radio Frequency angamba tsy manondro fa nahita bibikely ianao; mihaino ho solon'ny solosaina haingana sy maharitra, izay manondro fandefasana signal radio.
Antso fiantsoana ny polisy akaiky anao raha mino ianao fa nahita zavatra.
Inona no hatao raha mahazo fakantsary miafina ianao?
Raha misy olona manafina fakantsary amin'ny toerana iray ao amin'ny trano iray, efitrano fandraisam-bahiny, trano fandraisam-bahiny ary fiara, dia tsy manohitra ny lalàna izany ary amin'ny alàlan'ny fahazoan-dalàna ihany no ahafahanao manao izany. Ohatra, ao anatin'ny fitsipiky ny orinasa manofa momba ny fitaovana elektronika fanaraha-maso elektronika dia mila manambara mpilatsaka an-tsehatra izy ireo hamoaka ireo gadget fanaraha-maso rehetra ao anaty lisitry ny lisitr'izy ireo, ary mandrara ny fitaovam-pitondrana ao anatiny na manadihady ny anatiny any amin'ny toerana tsy miankina sasany toy ny efitrano fatoriana sy efitrano fandroana na inona na inona. ny nahitana azy ireo. Hamarino fa efa nandinika lisitra fanoratana vakansy ianao tamim-pitandremana momba ny fangatahana fakantsary mpitia ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny alohan'ny hamakianao azy. Raha mahita iray ao amin'ny trano fialan-tsasatrao ianao dia avelao avy hatrany hiteny amin'ilay orinasa. Raha sendra mahita fakantsary miafina ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ianao dia manontany avy hatrany. Ho an'ny vokatra manara-penitra avo lenta kitiho eto.
Ny fakantsary miafina Lawson dia tsy mitovy amin'ny fahefan'ny polisy. Amin'ny toe-javatra maro, mety tsy ara-dalàna raha misy olona manoratra anao raha tsy fantatrao. Rehefa lasa teknolojia dia lasa milamina kokoa sy mihena kokoa ary mihamalalaka ny fakantsary sy ny fitaovana fihainoana. Na dia goavambe ho an'ny olona maniry hanao fanaraha-maso aza izany dia mampihena ny fahafahanao mahatsiaro tena ho voaro amin'ny masonkarenao, na dia mitoka-monina tanteraka aza ianao. Na dia amin'ny tranga sasany aza dia mety ambenana amin'ny fakan-tsary miafina ianao amin'ny alàlan'ny lalànan'ny faritra misy anao - ny polisy, ohatra, dia tsy afaka mamboly ireo fitaovana ireo raha tsy misy ny taratasy fahazoan-dàlana, ary ny olom-pirenena tsy miankina dia tsy afaka mandrakitra feo na horonan-tsary matetika any amin'ny toerana tsy misy fahalalana sy alalana avy amin'ny olona voarakitra an-tsoratra - ny fahalalana mamantatra fitaovana miafina dia mety ho sarobidy kokoa noho ny lalàna natao hiambenana anao amin'izany.
Raha mahita olona mandika lalàna ianao amin'ny alàlan'ny fanimbana ny fiainanao manokana, ampahafantaro ny polisy avy hatrany, ny fitantanana trano fandraisam-bahiny raha ao amin'ny hotely iray ianao amin'ny fialan-tsasatra na ny fampahalalam-baovao. Tokony hikaroka efitrano misy fikarakarana tsara ianao mba hahazoana antoka fa tsy mandetika fitaovana sy fanaka, satria mety hiteraka olana ara-dalàna sivily na heloka bevava izany (raha ao amin'ny hotely ianao). Mialà amin'ny fifamaliana amin'ny teny mafana miaraka amin'ireo mpiasan'ny hotely izay mety hitranga amin'ny vokadratsin'ny vatana.
Rehefa tsy tokony hizaha fakantsary miafina ianao:
Ny fisavana fakan-tsary miafina mandritra ny fotoana rehetra dia tsy hevitra tsara. Mpanapaka ny Tale Jeneralin'ny Fifanarahana arahin'asa ary miaramila teo amin'ny Tafika manokana sy Green Beret no mihevitra fa any amin'ny firenena maro toa an'i Russia sy i Shina dia azo inoana fa manara-maso mavitrika ireo serivisy fitsidihan'ny fitsangantsanganana mpivarotra ny orinasa any amin'ny firenena maro toa an'i Russia sy i Shina. Na iza na iza noheverin'izy ireo mampiasa teknika fikarohana hahitana fitaovana miafina ao amin'ny trano fonenany dia azo inoana fa marika ho toy ny mpanamory fitsikilovana mampatahotra ary tsaboina. Ny mitondra ny fitaovam-pitadiavana kely lafo vidy indrindra amin'ireto firenena ireto dia azo inoana fa hampidina ilay mpandeha amin'ny rano mafana, indraindray alohan'ny handao ny seranam-piaramanidina akory aza.
10629 Total Views 1 Views Today